पुरुषसँग समान काम : ज्याला भने आधा कम किन ? - Nepalese Times
पुरुषसँग समान काम : ज्याला भने आधा कम किन ?
नेप्लिज संवाददाता २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:३९ (1 महिना अघि) ७० जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । म्याग्दीको एक निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षिकाले भन्नुभयो – समानता त नारामा मात्रै हो, व्यवहारमा भने अझैसम्म देखिएको छैन । उनले अझै थप्नुभयो– मैले सात वर्षदेखि आधारभूत तह ९कक्षा १–८० मा अङ्ग्रेजी विषय पढाउँदै आएकी छु, तर मेरो तलब सोही तहमा पढाउने शिक्षकको भन्दा आधा कम छ ।
पुरुष कामदारले भन्दा बढी श्रम गरे पनि ज्यालामा भने ठगिनुपरेको महिला श्रमिकको भनाइसँग जिल्लाका महिला अधिकारकर्मी पनि सहमत छन् । बेलाबेलामा हुने महिला अधिकार र श्रमका कार्यक्रमको भाषण गरे पनि श्रमिक महिलाको अधिकारका बारेमा महिला अधिकारकर्मीले खासै केही गर्न नसकेको जिल्लाका श्रमिक महिलाले बताएका छन् । जिल्लाका महिला अधिकारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीलगायतको संयुक्त पहलमा समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने भनि विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृसङ्गठन, उद्योगी, व्यवसायीलगायत कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानकारी गराइए पनि श्रमिक महिलाको ज्यालामा वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष रहेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट